China Foni Yakadzoka Sungira fekitori uye vagadziri | SJJ
Yakakwira hunyanzvi, yakawanda-mashandiro, inobatsira uye ine fashoni yekushandisa kune yako nhare mbozha. Netambo imwe yekudzosera foni, yakachengeteka uye yakasimba kuti iwe unogona kusunungura maoko ako usinganetseke kudonhedza foni yako zvakare. Silicone nhare mbozha yekumashure mabhande chinhu chikuru chinopa kusimudzira bhizinesi rako.Feat ...
Yakakwira hunyanzvi, yakawanda-mashandiro, inobatsira uye ine fashoni yekushandisa kune yako nhare mbozha. Netambo imwe yekudzosera foni, yakachengeteka uye yakasimba kuti iwe unogona kusunungura maoko ako usinganetseke kudonhedza foni yako zvakare. Silicone nhare mbozha yekumashure mabhanhire ipa rakakura rekusimudzira bhizinesi rako.
Yakakwira giredhi silicone zvinhu zvinopa hwakareba hupenyu hwakareba uye kushandira kwenguva refu
Chengetedza foni yako pamberi, zviri nyore kuchengetedza kiredhiti kadhi, mari uye kadhi rine zita rebhizinesi.
Tambo yekumashure inowedzera kubata kwakachengeteka kufoni yako uye nekuichengeta kubva mukutsvedza nekutsvedza, uye inopa chengetedzo kubva pakukwenya kwepamusoro pamasiraidhi ese.
Mhando mbiri: Nekadhi homwe uye epurasitiki clip chishongedzo, isina homwe uye zvishongedzo
Tsika yekudhinda logo inogona kuwedzerwa pane iripo mold.
Pashure: Runhare Anti-Slip Pad Mat
Zvadaro: Acrylic zvishongo, Maki uye Vamwe